Dr Nagaasoo: Qabsaa’aa Mirga Dhala Namaa – Oromedia
Home » Marii » Dr Nagaasoo: Qabsaa’aa Mirga Dhala Namaa
Seenaan kun haarawaa dha; haarawaas miti. Garuu kan beekuuf, seenaa ikun seenaa mala Jarmanirraa Sudaan ….Sudaanii irraa Itiyoophiyaa…Pireziidantii Itiyoophiyaa…..Dorgomaa paarlaamaa dhuunfaa….Dhaaba siyyaasaa Mormaa…..Gaardiin eegamurraa gara Taaksii uummataan imaluu kan of keessaa qabu.
Dur gaafa isaan daandiirra darban nageenya isaaniif jedhamee daandiin cufamee hamaamota baay’een hordofamanii Phuu phuu…xuu xuu..gochisiisaa imalu ture. Kun seenaa Dr.Nagaasoo Gidaadaa ti; Dr Nagaasoon Hayyuun seenaatis.
Carraa gaazexeessummaan isaaf kennitetti fayyadamuun Mitiku Fekadu guyyoota lamaaf turtii isaanwaliin taasiisera.
Mitiku Fekadu akka jedhetti, Dr.Nagaasoon beellama baay’ee kabaju.Xiyyeeffannoo namaaf kennanii nama dhaggeeffatu. Yeroo sanatti, gaaffiiwwan Miidiyaarra oolchuu hin dandeenye, isaan gaafateera; keessumaa dhimmoota siyaasa biyya kasaarratti. Kinoo ti: dubbisa gaarii!!
TPLF akkamitti isinin Pireziidantiif filachuu danda’ee? jechuun isin qabsoo hidhannoorra hin turre .Biyya jarmanii dhuftanii akkamitti amanummaa argattanii?
Dr.Nagaasoo: ani warra. TPLF waliin kaniin wal arge bara 1977 biyya Jarmanittidha.Yeroo sana isaan bosona jiru turan.Gaazexeessituun Raadiyoo Ameerikaa (VOA) kutaa Amaariffaa tokko naaf bilbiltee namoonni keenya qabsoorra jiran biyya Jarman dhufanii Tarsiimoo isaanii Mootummaa Jarmanii fi Lammilee Itiyoophiyaa Jarman jiraatanitti ibsachuu barbaadu gargaaruu dandeessaa? gaaffii jedhu naaf dhiyyeessite.Anis yeroo sanatti barattoota bakka bu’een sochii qabsoo gaggeessa ture .Warrant ABO waliinis walitti buunee waan jirruuf filannoo gaariidha jedheen biyya Jarman akka dhufaniif haala mijeesseefiira.Haalli ani mijeessees eeyyama baasuu,galma eeyyamsiisuu faa turan.Jarri warri TPLF dhufanii Tarsiimoo isaanii uummata Diyaaspooraaf ibsaniiru.Galma keessattis ta’e angawoota Jarman biratti Afaan hiikaafin ture(Ingiliffaarraa gara Afaan Jarmanitti).Akka Dr.Nagaasoo jedhanitti namoota TPLF yeroo sana Biyya Jarman Zeeman keessaa ;Ambassador Addisuu Baaleemaa,Birhaane Kiristoosii fi kanneen biroo akka ta’an naaf himaniiru.Imala isaanii kanaanis maallaqa hedduu bifa gargaarsaan akka argataniiran natti himaniiru.
Kanarraa ka’uunis bara kufaatii Dargii sana Sudaanitti waamamanii Miseensa OPDO akka ta’anidha.Icitiin Aangoo Pireeziidantummaas kanarraa akka ka’een filannoodhaan dhaabni isaanii akka filateerudha.
Heera (Constitution) amma biyyi kun itti fayyadamaa jirtu haala kamiin barraa’ee? isin ga’ee guddaa keessaa qabdu jedhama.Kan irratti maal jettu?
Dr.Nagasoo; Dursa uummanni irratti mariisisameera.Haala kamiin? gaaffii kooti.1.Dabbballoonni dhaabbilee siyyaasaa hundi irratti hirmaachuun hanga gandaatti uummata mariisisaniiru.Dhaabbilee siyyaasaa kana keessa ABO’n jira.
2.yaada Uummataa mata Dürer dureedhaan manni mares federeeshinii yeroo cehuumsaa dhaabbilee hunda keessaa dhufanii marii irratti taasisaniiru.
Oromiyaan Fedhii addaa Finfinneerraa argatti kan jedhu maal turee?
Dr.Nagasoo;eeyyee yaada baay’ee wal falmisiisaa ture. ABO’n guutummaa guutuutti Finfunnee bulchiinsa Oromiyaa jala galti yaada jedhu dhiyyeesse. Yaadni kunis yaada baay’ee wal nu falmisiise ture. Yaada kana gidduu galeessa godhachuun fedhii addaa kan jenne. Fedhiin addaa kun garuu yeroo booda itti deebinaan bira darbame.
Isin Aangoorra jirtan maaliif waa hin kaayyannee?moo carraasaati hin argannee?
Dr.Nagaasoo; Lakki ani namni hunduu waanuma qulqullummaan hojjetu natti fakkaata.Miindaa qaba,mana qaba,konkolaataa qaba maaliifan hata.
Akka Dhaabaattihoo? Yeroo warri TPLF dinagdeerratti hojjetan isin maal gootanii?
Haala Kanaan nuuf waan gale miti.Irra caalaammoo isaan yeroo qabsoorra turan saamaa turan .Baankiifaa saamaniiru.yeroon Mallas waliin wal lole yaadni tokko waa’ee Abbas qabeenyummaa Dhaabbilee EFFERT ture.Mallasis qeerransa ta’uun waa’ee dhaabbilee kanaa kaasuun yakka akka ta’etti.Mirga Uummata Tigiraayitti bu’uu akka ta’edha kan naaf kaasan.
Waa’ee Jeneeraaloota sadan tokkoos kaasnee ture. Jeneeraalichi amma Dubaayi jiru sun maaliin sooromee?
Inni qorannoo jedhaniiti asii is a gaggeessan garuu karaa duubaa Mallas Tarsiimoo humna waraana Sudan kibbaa akka hojjetuuf isa erge. Kaffaltiin isaa mootummaa Ameerikaarraa ture. Maallaqasaa hirataniitu soorome.
Dr.Nagaasoo yeroo warri Tplf sochii dinaagdee jalqaban isin maal hojjechaa turtan?
Nutis jalqabnee ture; Illuu Abbaa Booraatti Baabura midhaan daaku dhaabne; daldala jimaas jalqabnee ture. Gaafa Mallas waliin yaadaan waliin wal mormuu jalqabnu gaaffiin Koo inni guddaan waa’ee abbaa qabeenyummaa “EFFERT” ture. Yeroo kanaa kaasee Mallas baay’ee na jibbaa tures.
Obbo Leencoon faa gaafa biyya ba’an isinitu gaggeessee?
Dr.Nagaasoo; yeroo xiqqoo yaadanii….Mallas natti himeera.Gaafa isaan wal ga’ii dhiitan ba’an humnoonni tikaa fi waraanaa ajjeesuuf qopha’aanii turan .Waraanni jaraa (ABO) kaan gara bahaa ,kaan immoo gara lixaa waan turaniif garuma sana deemu jedhamee karaatti akka ajjeefaman mariin tureera.Kanaafidha karaa Boolee akka ba’an kan ta’e.Jarri garuu osoo obsanii taa’niiru ta’e gaarii ture.
Falaasamni jireenya keessanii maalidhaa?Dr.Gaaffii jedhun kaaseef.
Ani nama siyyaasaa osoo hin taane qabsaa’aa mirga dhala namaaf falmudha.Osoon nama siyyaasaa ta’e silaa aangoo dhiisee rakkoof hin saaxilamu.
Yaadota baay’een hambiseera; walitti deebina.
Mitikkuu Abbaa Amantii
Previous: Seenaa Gabaabaa Enginer Bantii Guddataa
Next: “Rakkoo Guddaan Mirga Ofiif Gaafachuu Dhabuu Dha” Dr Nagaasoo Gidaadaa